Naing BSell | Item - ကြိုက်တာယူ1800ks
Sakura Online Shop
Czi 2017 ဘီး လက်​တင်​စီး
1🐺212 Vip mascaraလေးပါနော့်
2🐺Aloe Vera Gel
ဒါက Aloe Veraရဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးပါနော်…
8 😄 နေလောင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အနီကွက်များပေါ်သို့ gelကို လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် ချက်ချင်း သက်သာအေးမြစေပြီး မူလအသားအရေအတိုင်း ပြန်လည်ရရှိစေပါသည်။ နွေအခါတွင် အသက်အရွယ်မရွေး မိတ်များပျောက်ကင်းစေရန် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဆားဝက်ခြံအတွက် ကျား/မရွေး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
👉🏻အမေး- မျက်နှာနေ့စဉ်သစ်ပါတယ်အရေပြားပေါ်ကဆဲလ်သေတွေဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ ?????
👉🏻အဖြေ- အရေပြားဆဲလ်သေတွေနဲ့ ဆားဝက်ခြံတွေဟာသန့်စင်စွာမဆေးကြောပါကတင်းတိပ် မှဲ့ခြောက်ဖြစ်ဖို့ကို အသင့်စောင့်နေပါတယ်နော်..
👉🏻အဖြေ- Charcoal Mask cream ဟာအရေပြားပေါ်ကဆဲလ်သေတွေကိုဖယ်ရှားပေးပြီး ဆားဝက်ခြံနဲ့ အဆီဖုတွေကိုည ခဏတာအတွင်း ခွာချပေးတာမို့ တင်းတိပ်မှဲ့ခြေက်ဖြစ်လာမဲ့ ရန်က ကာကွယ်ပေးပါတယ်
👉🏻အမေး- အကျိုးရလဒ်လေးတွေနဲ့ Charcoal maskအားသာချက်လေးတွေ သိချင်ပါတယ်
👉🏻အဖြေ-အချိန်15မိနစ်ပေးယုံနဲ့ဆားဝက်ခြံနဲ့ ဆဲလ်သေတွေကို အချိန်တိုတွင်းခွာချပေးပြီး အေးမြတဲ့ ထိတွေမှု့ကိုခံစားရပါ့မယ် မျက်နှာလေးဝင်ပြီးကျန်ခဲ့တာမို့ ဘာမှလိမ်းမထားရင်တောင် သန့်စင်တဲ့ မျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင်ရပ့ါမယ်
👉🏻အမေး- တစ်ဗူးဆိုဘယ်နှခါ အသုံးပြုလို့ရလဲ ပြီးတော့ ဈေးနှုံးကရော ?
👉🏻အဖြေ- တစ်ဗူးကို -1800ကျပ်ပါ
ယောကျာင်္းလေးမိန်းကလေး နှစ်ယောက်လုံးအသုံးပြုလို့ရပါတယ် ☑️
အသုံးပြု နည်း ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
2-မျ က်နှာခြောက်သွေ့အောင်သုတ်ပြီးလျှ င် Black Mask ကို မျ က်နှာတစ်ပြင်လုံး ထူထူလေး လိမ်းပေးပါ။
3-BlackMaskCream လိမ်းပြီး မိနစ် နှစ်ဆယ် သို့မဟုတ် နာရီဝက်ခန့်စောင့်ပါ။
4-ပြီးနောက် Mask ခြောက်သွားရင် အသာအယာလေး ခွာယူလိုက်ပါ။ဆားဝက်ခြံ၊ဝက်ခြံ များ လက်ဖြင့် ညှစ်စရာမလိုပဲ ပါလာပါလိမ့်မယ်​ရှင့်